Costa Rica: “Voaolana Aho, Hadisoako Ve Satria Nivoaka Alina?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2012 23:34 GMT
Fanamarihina : Ny rohy rehetra amin'ity lahatsoratra ity dia mankany amin'ny tranonkala miteny Espaniola.
Tamin'ny hery sy fahasahiana, no nanoratan'i SophiadelSol bilaogeran'ny Love Fashion & Vintage [Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: efa tsy azon'ny rehetra tsidihana intsony ity bilaogy ity.] ny fakàna an-keriny taminà fiara nanjo azy vao haingana, fangalarana sy fanolanana raha nivoaka alina niaraka tamin'ny sipany izy. Ao amin'ny fiaraha-monina izay miampanga ireo niharam-boina ho manolotra ny tenany ho amin'ny loza, halatra ary ireo zavatra hafa mety hiseho, mijoro misolo tena ireo niharam-boina ireo izy ary mametraka ny hadisoana amin'ny fiaraha-monina izay mamela ireny zavatra ireny hitranga.
Ny taratasy “That happened because you went out at night” na “niseho izany satria nivoaka alina ianao” dia nosoratany ho valin'ny fanamarihana nalefa tany amin'ny sipany rehefa nisy naheno ilay fakàna an-keriny fiara : hoe izany no hahazo azy satria nivoaka alina izy. Nosintoniny tamin'izany : midika ve izany fa hadisoany ihany koa raha voaolana izy ?
Manoratra mikasika ny zava-niseho nitondra nankany amin'ny fanafihana azy, amin'ny fitantaràna ny fomba nanafihan-dry zareo azy tamin'ny fanondroana basy avy tao amin'ny fiarany sy ny nanereny azy hanala akanjo, ary avy eo nafatony dia nasainy nihohoka teo afovoan'ny tanin-kafe. Soratany fa avy eo izy dia nentina niala teo mba haolana. Tantarain'i SophiadelSol ny fomba nandosirany, nankany amin'ny sipany sy ny niarahany nandritra ny ora maromaro tao anaty voly kafe mandra-pahitany ny làlana tamin'ny mangiran-dratsy. Ny valin-teniny : Tsia. Tsy hadisoan-dry zareo izany.
Ny Lanitra amin'ny Alina, Volana avy amin'i Ruthanne Reid nampiasaina eo ambanin'ny CCBy license
Sady tsia, tsy tokony ho nitranga taminay izany satria hoe nivoaka alina izahay, na hoe ny nahateny amin'ny toerana nisy anay tamin'iny, tsy hadisoanay, tsy hadisoan'iza na iza koa raha miseho ny karazan-javatra tahaka ireny. Saingy andraikitsika ny manao izay tsy hiverenan'ny zavatra toy izao indray. Tsy resaka fahamalinana na fiarovan-tena, fa ny vaha-olana dia ny fanovàna ireo lalàna mifehy antsika, noho izany mila mpitsara, mpampanoa lalàna, mpitandro filaminana sy mpanao fanadihadiana mafy tànana. Satria aty amintsika, ireo izay mandidy sy manapaka no tena tsy manara-dalàna. Ary tsy misy olona manao izay hanovàna izany. Ny fihetsika ” tsy raharahako izany” no betsaka any Costa Rica. Nefa raha ohatra aho ka zanakavavin'ny iray amin'ireo mpitsara ireo ? Hafa no mety ho fiafaran'ny tantara.
Avy amin'ireo olona mizara ny lahatsoratra amin'ny Facebook sy mitondra fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaoginy ny fanohanana ilay bilaogera.
Daniela López naneho hevitra amin'ny fiarahabana azy noho ny fahasahiany sy ny aingam-panahiny, amin'ny fanindriana fa mila olona betsaka toa azy ny firenena.
Ny mpamaky sasany dia nanararaotra ny zava-niseho mba hilazany ny tantarany, toa an-dry Catalina Orozco, izay nanoratra mikasika ny fanararaotana azy tamin'ny fahazazany sy ny fifanatrehany tamin'ireo olona manontany azy ny antony tsy nitantarany mihitsy izany fanararaotana izany :
Ny raiko niteraka ahy dia nanararaotra ahy foana, mandram-pitondrako vohoka ny zanako lahy (izay tena tiako) teo amin'ny faha-14 n'ny taonako. Tsapako maizina ny ho aviko, saingy tsy avelako ho tonga izany, nanapa-kevitra ny hiaraka amin'ny zanakolahy aho ary ankehitriny ( 9 taona aty aoriana) mahatsiaro mirehareha aho amin'ny fitenenana fa raha misy zavatra ananako be dia be amin'ny fiainana dia ny hazavana, ny hasambarana ary ny filaminana anaty.
Hamafisiko io ho famehezana izao zavatra manaraka izao : tsy nisy zavatra nahatezitra mafy toy ny fanontaniana tsy miova napetraky ny olona hafa ‘ nahoana ianao no tsy niteny na inona na inona ? noho izany, hadisoako ve raha nararaotina aho satria tsy niteny na inona na inona ‘ ?
Lechuga dia nanampy ny fanehoan-keviny, hoe toy ny fomba fiverenana miaina ny zavatra niainany manokana ny famakiana ny lahatsoratr'i SophiadelSol, miaraka aminà fiovana roa monja. Maneho ihany koa izy ny firaisankinany manoloana ireo rehetra izay manimbazimba vehivavy sy manankiana azy ireo amin'ny fomba fitafy hafa, mandeha any amin'ny trano fisotroan-toaka, misotro, na matoky olona. Na dia notaterin'i Lechuga aza ilay loza, dia tsy nisy zavatra nivoaka avy amin'izany:
Farany, tsy nahomby ny dingana ara-pitsarana ahy, tantara hafa-na antontan-taratasy navangongo miaraka amin'izay sisa : ( manantena aho fa raha manapa-kevitra ny hanohy ny fitoriana ianareo dia ny manao an'arivony no tsaratsara kokoa, mampandray andraikitra ny tenanareo manoloana ireo mpanao fanadihadiana, ny mpampanoa lalàna sy ny hafa satria izy ireo dia mpanambony lehilahy. Noho izany mahatanjaha, mahereza, ary asehoy azy ireo fa vehivavy lehibe ianao…
Fernando Arias, rehefa nanamafy fa raha araka ny heviny dia tsy misy hadisoan'izy ireo amin'izany, dia manandrana miteny mafy ireo olona miasa ao amin'ny fitsarana izy. Mino ihany koa izy fa tsy tena vahaolana ny fanovàna ny lalàna.
Amim-panajana lehibe, tsy miombon-kevitra amin'ny vahaolana mifandraika amin'ny fanovàna ny lalàna aho ; raha amin'izay làlana izay dia hiaro ny mpanao lalàna matihanina aho. Tsy tompon'andraikitra amin'izay miseho ety ivelany izy ireo, no sady tsy tompon'antoka ihany koa amin'ireo izay mpandray anjara ao anatin'ilay dingana. Nefa asehoko ny fanajana ambony sy ny fankasitrahana anao, satria na dia tsy niaina taminà traikefa nampisahotaka tahaka izany aza aho, dia azoko tsara izany hoe voahambana fitaovam-piadiana sy very fanànana.
Fa ho an'i SophiadelSol, dia faranany amin'ity fanambaràna ity :
Vehivavy matanjaka aho, mandeha mitraka, tsy misy olona na zavatra mahasakana ahy amin'ny fiainako, ny nofinofiko sy ny tanjoko. Tsy matahotra aho no tsy menatra ihany koa. Izaho ihany no ilay olona iray volana lasa izay, saingy matanjaka kokoa, matotra kokoa. Niaina nofy ratsy aho saingy eto aho izao mitantara izany, mba ho fantatry ny rehetra fa mitranga isan'andro izany zavatra izany. Tsy misy gazety na vaovao manaparitaka itony fanamarihana itony, tsy mahaliana ahy izay antony. Ny hany zavatra iriako raha mitantara ity fijoroana vavolombelona ity aho dia ny tsy hisian'ny olona ho tratra tahaka izao intsony, tsy maintsy hajanona ity !